Uyenza njani ioyile yevumba elimnandi - Ukwenza Amakhandlela
Uyenza njani ioyile yevumba elimnandi
Ukuba unomdla wokwenza ubuqhetseba ekwenzeni ikhandlela, ukufunda indlela yokwenza imixube yeoyile yamavumba eyahlukileyo eyahlukileyo yindlela eya kuyo. Ukwenza ivumba lokutyikitya kwamakhandlela akho kungonwabisa, kwaye uya kuzama zonke iintlobo zeziqholo ezahlukileyo.
Ivumba leoyile yokuDibanisa iioyile
Iingcali zeziqholo ziya kukuxelela ukuba ukudala umxube wevumba luhlobo lobugcisa, kwaye banyanisile. Zininzi izinto eziqwalaselwayo eziya ekudaleni ivumba elitsha, kodwa ungavumeli oko kukuyekise ekuzameni. Amakha yinto yobuqu, ke ukuba uyakhubeka kwinto oyithandayo, isayensi emva kwayo ayinamsebenzi!
Amakhandlela eTshokholethi Anuka kamnandi
Ukhetho lweeKhandlela zeYankee
Iiseti zeZipho zeKhandlela leVanilla
Oko kwathethi, kukho izinto ezintathu ezisisiseko ekudaleni ivumba elimnandi:
Amanqaku aphezulu I-Citrus, i-mint kunye ne-bergamot yimizekelo yamanqaku aphezulu.
Amanqaku aphakathi-Amanqaku aphakathi ane-heft ethe kratya kunye namandla okuhlala kunamanqaku aphezulu. ILavender, umthi weti kunye nomjunipha zonke zithathwa njengamanqaku aphakathi.
Amanqaku eSiseko-Amanqaku esiseko anamavumba anzima ahlala ixesha elide kunamanye amanqaku amabini, ebonelela ngesiseko sevumba. I-Patchouli, i-vanilla, kunye ne-amber yonke imizekelo yamanqaku esiseko.
Njengoko ujonga indlela yokwenza ioyile yevumba elimnandi eyahlukileyo, cinga malunga nokuba yeyiphi ioyile eya kuhamba kunye ukusuka kumanqaku amathathu.
Uyenza njani iMixube yeoyile yamafutha
Umxube weoyile yevumba elimnandi yindibaniselwano yeoyile yevumba eyahlukileyo okanye iioyile eziyimfuneko ezidibanisa kunye ukwenza ivumba elitsha. Kuba ezi oyile zinokubiza kakhulu ukuthenga, uya kufuna ukuzama nge-drop okanye ezimbini ngexesha de ufumane indibaniselwano oyithandayo.
Nantsi indlela ebiza iindleko yokwenza imixube yeoyile yevumba elimnandi.
Iglasi encinci yeglasi enemibala enesiciko okanye isivalo
Iicotton swabs, iibhola zomqhaphu, okanye iitawuli zamaphepha
Ioyile yevumba okanye iioyile ezifanelekileyo ezineedropha
Ukuba usebenzisa iibhola zekotoni okanye iitawuli zamaphepha, zinqumle kwizikwere ezincinci okanye iziqwenga nje ezikhulu ngokwaneleyo ukuba zinethontsi leoyile yevumba elimnandi. Ngee-swabs zomqhaphu, zinqumle kwisiqingatha.
Beka ithontsi elinye levumba elimnandi okanye ioyile efanelekileyo kwelinye lamaqhekeza ekotoni, iphepha, okanye i-swab enesiqingatha kwaye uyibeke embizeni. Qhubeka nokwenza oku ngeoyile nganye enuka kamnandi onqwenela ukuyisebenzisa. Ukuba ufuna ukwenza ivumba elinye libe namandla, sebenzisa iziqwenga ezibini okanye ezithathu ezahlukileyo zekotoni okanye itawuli yephepha elinethontsi elinye leoyile nganye.
Ngokukhawuleza rekhoda ukuba mangaphi amathontsi eoyile nganye oyibeke engqayini. Oku kuyakuqinisekisa ukuba uza kuphinda ikopi, okanye utshintshe iimali ukuba kukho imfuneko.
Vumela ingqayi ihlale, ingatyhilelwanga kangangeeyure ezimbalwa, emva koko uve ivumba elidibeneyo. Iphunga liya kutshintsha njengoko lidala, kodwa ungongeza ioyile okwangoku ukuba uziva ukuba iioyile zakho ezilula ziyonganyelwa.
Vala ingqayi kwaye uyivumele ihlale kubushushu begumbi, kude nelanga ngqo, kangangeentsuku ezimbalwa. Xa uvavanya umxube wakho wevumba elimnandi, esi iya kuba sisiphumo sokugqibela.
Iingcebiso zokuQinisa iioyile
Ngelixa uzama indibaniselwano eyahlukeneyo yevumba elimnandi kunye neeoyile ezifanelekileyo, nazi iingcebiso ezimbalwa zokugcina engqondweni.
virgo umfazi capricorn indoda ebhedini
Qiniseka ukuba usebenzisa idropha ukubeka ioyile kwithonje okanye iphepha letawuli, kunokuba uzame ukuthulula nje ithontsi. Uya kuba nexesha elinzima ukuzama ukwenza imilinganiselo ngqo ngenye indlela.
Sebenzisa i-dropper ecocekileyo kwivumba ngalinye.
Rekhoda yonke into, ukusuka kwixabiso leoyile nganye ukuya kwimbonakalo yakho yevumba. Ukuba ufuna ukuguqula umxube wakho, kuya kunceda kakhulu ukuba ube namanqaku aneenkcukacha zenyathelo ngalinye kwinkqubo.
Ukuba uzama ukudibanisa izinto ezahlukeneyo ngaxeshanye, phawula ngokucacileyo ingqayi nganye ukuze uqiniseke ukuba yeyiphi.
Nje ukuba ufumane indibaniselwano yeoyile egqibeleleyo, cinga ngegama layo kwaye uyenze ibe livumba lakho lokutyikitya. Ukuba udala ivumba lokwenza amakhandlela, soloko uqinisekisa ukuba ioyile nganye ine-flashpoint ekhuselekileyo yohlobo lwamakhandlela owenzayo.
Ukungathembeki Uqhawulo-Mtshato Umtshato Mishaps Ukuthandana Iiwebhsayithi Ukuhamba Deals
Ukuhlala In San Francisco
Indawo efanelekileyo yokuhlala eFlorida
isicakazana semizekelo yentetho yodade
indlela yokulungisa izityalo zestrawberry ebusika
loluphi uphawu lwesagittarius oluhambelana kakhulu